डा. केसीको माग पूरा गर – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
डा. केसीको माग पूरा गर
२०७१ चैत्र १३, शुक्रबार ०२:२३ गते
स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा मेडिकल क्षेत्रका विकृतिहरु हटाउन संघर्षरत शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी फेरि पाँच दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । चारपटकको अनशनका क्रममा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आफ्ना माग पूरा गराउन दसदिने ‘अल्टिमेटम’ दिँदासमेत सुनुवाइ नभएपछि उनले बाध्य भएर अनशन रोजेका हुन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को प्राज्ञिक तथा भौतिक क्षमताले धान्नै नसक्ने गरी नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिन नहुने उनकोे प्रमुख माग हो । तर, अनशनको पाँचौँ दिनसम्म पनि डा. केसीको माग पूरा गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । केसीको मागप्रति देशभरका सर्वसाधारण, पेसाकर्मीहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यस्तै, शिक्षण अस्पतालका २ सय ५० रेजिडेन्ट डाक्टर, आइओएमका विद्यार्थी तथा विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले केसीको अभियानमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन् । तीन करोड जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको सवालमा मेडिकल माफियाहरुको प्रभावमा परेको सरकार अझै ब्युँझेको छैन ।
‘अदालत, अख्तियार, सरकार तथा विश्वविद्यालय मेडिकल माफियाकै इसारामा चल्ने गरेको’ गम्भीर आरोप लगाएर अनशन थालेका डा. केसीको खण्डन गर्ने सामथ्र्य कसैले राखेन । अघिल्ला चार अनशनका क्रममा आफैँले गरेको सहमति कुल्चिएर राजधानीका मनमोहन मेमोरियल, पिपल्स डेन्टल, नेपाल प्रहरी र काठमाडौँ मेडिकल कलेजलाई सरकारले मनसायपत्र प्रदान गरेको थियो । प्रायः मेडिकल कलेजमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता तथा निकटका व्यक्तिहरु हिस्सेदार रहेको पाइएको छ । प्राज्ञिक क्षमता र बिरामी नै नभएका मेडिकल कलेजलाई माफियाको इसाराका भरमा सम्बन्धन दिन नहुने अडान राखेर संघर्षरत डा. केसीको मागप्रति सबैले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । मापदण्डअनुसार एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि २ सय ५० देखि ३ सय जनासम्म प्राध्यापकको आवश्यकता हुने जनाइएको छ । तर, अधिकांश कलेजले मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट गरिने सुपरिवेक्षणका लागि भारतबाट ‘खडेबाबा’ झिकाएर प्राध्यापकको जनशक्ति देखाउने प्रवृत्ति छ । जब कि, भारतमै ४० प्रतिशत प्राध्यापक अपुग रहेको बताइन्छ ।
मेडिकल कलेज अहिले नितान्त व्यापारिक उद्देश्यबाट खोलिने गरिएको छ । बिनापूर्वाधार पैसा हुने जसले पनि मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने भएपछि त्यसले चिकित्सा क्षेत्रमा पार्ने दूरगामी असरबारे डा. केसीले सरकारको आँखा खुलाइदिएका मात्र हुन् । यसरी भटाभट मेडिकल कलेज खुल्दै जाने हो भने शैक्षिक क्षमता नभएका विद्यार्थीले पैसाका बलमा सजिलै चिकित्सा शिक्षा पढ्न सक्नेछन् । क्षमता भएकाहरु वञ्चित हुँदै जानेछन् । चिकित्सा शिक्षा महँगो हुँदै जाने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्कँदै जाने कारण यस्तै विकृतिको परिणति हो । सर्वसाधारणका छोराछोरीको शैक्षिक क्षमता भए पनि चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्ने सपना अधुरो हुनेछ । त्यसैले, यस्ता विकृतिविरूद्ध डा. केसीले ज्यानको बाजी लगाएर मुलुकको हितका लागि जुन त्याग देखाएका छन्, त्यो आफैँमा सराहनीय छ । सरकारले समयमै राष्ट्रिय स्वार्थका लागि अनशन बस्न बाध्य भएका डा. केसीको माग पूरा गरी आफ्नो साख जोगाउनु जरूरी छ ।
बढ्दो दुर्घटना चिन्ताको विषय